China BL6141 Compact Outer Rotor BLDC Fan Motor rụpụta na Factory | Staba
Product aha: Kọmpat Mpụga Rotor BLDC Fan Motor
Nodị No.: BL6141
Gosiri ikike: 9.6W
Gosiri Voltaji: 24V DC
Gosiri Speed: 1385RPM
Atụmatụ: Obere ikike / kọmpat Size / Mfe Asschịkọta / Mpụga ntụgharị / Mgbatị dị elu / Obere Uzo / Ogologo Ndụ
Pịa Nweta Motion Ngwọta Motion Ugbu a!
Nkọwa Enweghị ibu Max arụmọrụ Max mmepụta Ike
Ọsọ (RPM): 1,860 Bɛyɛ mfe 1,385 805
Ugbu (A): 0.12 0.629 Ogbe 1.53
Torque (Nm): 0 0.067 0.84
Mmepụta Power (W): Ugboro abụọ 9.68 15.55
Voltaji (V): 24 24 24
BL6141 Compact Outer Rotor BLDC Fan Motor jikọtara Staba 10 afọ nke mmezi DC Motor na ahụmịhe nrụpụta iji mepụta Electric Fan BLDC Motor Solutions pụrụ iche. E jiri ya tụnyere ndị eletriki eletriki eletriki gara aga nwere AC Motors, ndị ọkụ eletrik na-eji brushless DC Motors nwere ike oriri ala.
BL6141 Compact Outer Rotor BLDC Fan Motor na-arụ ọrụ na 24VDC ma na-enye 1385RPM High Speed ​​na obere ike ike na 9.6W.
Anyị Staba Motor ga-aga n'ihu na-ebuli Fan Motor Solution, iji chepụta ma mepụta Nta, Mkpa ọkụ, karịa Enyi na Enyi na Nchekwa Ike, Fan Intelligent Control, Stepless Speed ​​Regulation, Lightweight and Environment Protection Trend.
Nke gara aga: BLN5560 Fascia Gun Outer Rotor BLDC Motor
Osote: BL75120 BLDC Fan Motor
Egwuregwu eletriki eletrik bụ otu n'ime ngwa ụlọ eji eme ihe. Ha nwere ọtụtụ ụdị ma jiri ya mee ihe. Agbanyeghị, ndị ọkụ eletrik ugbu a na-ejikarị ụgbọ ala AC nwere oke ike, ọ na-adịkarị karịa 60 watts, nke na-ewe nnukwu ike. Dịka obere ngwa ụlọ nke kwesịrị ịgbanye ogologo oge, ike ya, mkpọtụ ya, na oke ikuku ya bụ ihe kachasị mkpa maka ịtụle ngwaahịa a. Maka ngwaahịa Electric Fan, moto bụ otu n’ime ihe ndị kachasị mkpa.
Imirikiti ndị ọkụ eletrik na ahịa ugbu a na-eji moto AC nke ọdịnala, nke nwere obere ọrụ ọrụ, mmezi na-adịghị mma, ike oriri dị elu, na obere njikwa moto. Iji mee ka afọ ju ndị mmadụ na ọnọdụ ojiji dị iche iche na gburugburu ojiji dị iche iche, a chọrọ ọtụtụ ọsọ ọsọ, obere mkpọtụ, ndụ ọrụ ogologo, na ụdị dị iche iche dịka usoro ojiji dị iche iche si dị. Omenala AC Motors enweghị ike iru ihe ndị a chọrọ.
Iji dozie nsogbu ndị a dị n'elu, Staba Motor jikọtara afọ 19 nke mmezi moto DC na ahụmịhe nke mepụtara n'ụzọ pụrụ iche Electric Fan BLDC Motor Solutions. Tụnyere gara aga Electric Fans onwem na AC moto, Electric Fans iji brushless DC Motors na ala Power Oriri na High arụmọrụ. E wezụga Energy-vingchekwa na Ike-Ichekwa, jiri ya tụnyere ot AC moto na a mgbe nile-ọsọ adiana ịmafe mode nke banyere 3 Kwadobe, ọbụna a ọkọlọtọ Brushless DC moto nwere ike ịtọ ọsọ na uche. Ọ bụ ezie na ị na-ahụ ọtụtụ ndozi ikuku na-agba ọsọ ọsọ, enwere ike ịkwadebe ya na ọnọdụ ikuku dị mgbagwoju anya. Na ọrụ a, ọbụlagodi na ị na-eche ihu eletrik eletrik ogologo oge, ị gaghị enwe ahụ erughị ala n'ihi oke Mpịakọta Ikuku.
Ọzọkwa, Staba Motor ga-aga n’ihu na-ebuli Fan Motor Solution iji mee ka BLDC Motor pere mpe, mpe ọkụ, nwee mmekọrịta enyi na gburugburu ebe obibi, yana nchekwa nchekwa. Ihe mgbaru ọsọ anyị bụ izute ofufe ọgụgụ isi akara, stepless ọsọ ụkpụrụ, fechaa, ike na-azọpụta, na gburugburu ebe obibi-echebe.
Stana Motor nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ afọ 10 nke ahụmịhe na injinia ịhazi injin, ọkachasị na Electric Fan akwakọbala nnukwu Mpempepe Mpempe Akwụkwọ Mpempe maka ntụnye ndị ahịa ma ọ bụ nhọrọ, nhọrọ nha otu nhọrọ, ma ọ bụ encoder, ngwa ngwa dị ka ndị ahịa chọrọ iji mezuo ma ọ bụ gafere ahịa ina. Staba Motor kemgbe a pụrụ ịdabere na moto eweta na emeputa kemgbe 2010. Maka ozi ndị ọzọ na Electric Fan BLDC Motor Solution, Biko kpọtụrụ anyị.
BLDC Motor maka Home Fan
Brushless DC Motor maka Home Fan
Brushless Motor maka Home Fan
Kọmpat Mpụga Rotor BLDC Fan Motor
Eco BLDC Motor maka Home Fan
FOC BLDC Motor maka Fanlọ Fan
FOC Control Motor maka Home Fan
FOC Motor maka Home Fan
High-adịgide adịgide BLDC Motor maka Home Fan
High Oru oma BLDC Motor maka Home Fan
High Speed ​​BLDC Motor maka Home Fan
High Torque BLDC Motor maka Home Fan
Ogologo Ndụ Oge BLDC Motor maka Home Fan
Low-eri BLDC Motor maka Home ofufe
Low Noise BLDC Motor maka Home Fan
Motor maka Home ofufe
BLDC Fan Motor, Moto, Brushless DC Motor, Igwe Brushless, BLDC Igwe, Agụụ Cleaner, ase maka pricelist